Global Voices teny Malagasy » Tetikasan-tsarintany Japoney Mandrakitra Ny Fivezivezena Farany Nataon’ireo Niharam-boinan’ny Tsunami 2011 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Marsa 2016 8:35 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Voina
Tetikasa fandraketana an-tsarintany vaovao  no mamantatra ny fotoana farany niainan'ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany sy ny Tsunami Martsa 2011 tao Japana .
Antsoina hoe “Tsy Hanadino Mandrakizay anie Isika: Mandrakitra ny Fivezivezena Farany Nataon'ireo Niharam-boinan'ny Loza Tsunami” (忘 れ な い: 震災 犠 牲 者 の 行動 記録), manadihady ny fotoana farany niainan'ireo olona 1 326  ny tetikasa, izay mifototra tamin'ny tafatafa nifanaovana tamin'ny fianakavian'izy ireo tafavoaka velona.
Ny Zoma 11 Martsa 2011 tamin'ny 2:46 hariva ora ao an-toerana, nisy horohorontany goavana niseho tao amin'ny ranomasina avaratra andrefan'i Japana. Niteraka tsunami goavana ny horohorontany ka nandrava tanàna amorontsiraka maro sy tanàna manamorona ny morontsirak'i Japana mihoatra ny 500 kilaometatra. Ny 11 Martsa, nahafaty olona efa ho 16.000 ny tsunami, ary olona hafa 2 562 no mbola tsy hita  ary heverina fa efa maty.
Niaina onja avo indrindra ny prefektioran'i Iwate, miaraka amin'ny morontsirakany misy ny fjords (helodrano) tery izay mety nanome lalana ny herin'ny tsunami, voalaza fa lava be tahaka ny trano misy rihana folo ny onja sasany. Mponin'i Iwate 5 797  no namoy ny ainy na tsy hita popoka vokatry ny tsunami.
Ny tetikasa Tsy Hanadino Mandrakizay anie Isika  (忘 れ な い: 震災 犠 牲 者 の 行動 記録) dia miresaka ny dingana farany niainan'ireo olona ireo talohan'ny tsunami namely azy ireo fony mbola velona. Ny tetikasa fandraketana an-tsarintany antserasera dia manome fijery mikasika ny fomba fihetsiky ny olona rehefa mitranga ny loza voajanahary, ary mampanantena hanampy hanatsara ny fomba ahafahan'ny fitondram-panjakana miatrika izany sy manampy amin'ny fanavotana aina.
Ny teboka manga dia maneho ireo lehilahy niharam-boina , ny teboka mena kosa maneho ny vehivavy. Mampiseho ny lalana noraisin'ireo vahoaka folo minitra taorian'ny tsunami ny fihetsiky ny sary. Ny olona sasany nihazakazaka, ny hafa kosa nandeha an-tongotra, izay manazava ny antony mahatonga ny olona sasany afaka nandeha lavitra kokoa tao anatin'ny folo minitra. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny scrollbar (mamerinkorisa amin'ny totozy) eo amin'ny farany ambanin'ny efijery, dia azo atao ny mampandroso na mampiverina ny fotoana.
Pikantsary avy amin'ny fitaovam-pandraketana an-tsarintany an-tserasera.  Tsy Hanadino Mandrakizay Anie Isika ( 忘れない: 震災犠牲者の行動記録)
Ny tetikasa dia vokatry ny fiarahamiasa amin'ny Oniversite Metropolitana Tokyo  sy ny mponiny ao amin'ny studio WTNV , ary ny sehatra fampahalalam-baovao Tohoku Iwate Nippo .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/03/25/80453/
 Tetikasa fandraketana an-tsarintany vaovao: http://iwate.mapping.jp/
 horohorontany sy ny Tsunami : https://globalvoices.org/specialcoverage/2011-special-coverage/japan-earthquake-tsunami-2011/#featured
 olona 1 326: http://resemom.jp/article/2016/03/10/30270.html
 olona hafa 2 562 no mbola tsy hita: https://en.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_earthquake_and_tsunami#cite_note-39
 lava be tahaka ny trano misy rihana folo : http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/quake_tsunami/AJ201106030393
 Mponin'i Iwate 5 797: http://www.isobesatoshi.com/data/sisya-eastjapan.html
 ato : http://wasurenai.mapping.jp/2016/03/demo-movie.html
 Ny teboka manga dia maneho ireo lehilahy niharam-boina: http://wasurenai.mapping.jp/2016/03/howto.html
 Oniversite Metropolitana Tokyo: http://www.tmu.ac.jp/english/index.html
 ao amin'ny studio WTNV: http://labo.wtnv.jp/search/label/blog